Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun | RayHaber | raillynews
Gawaarida ay adeegsadaan kumanaanka qof ee Samsun ayaa maalin kasta looga daaweyaa fayraska. Gawaarida iyo basaska ku xiran Magaalada Samsun ee Magaalo Weyn SAMULAŞ A.Ş, oo ay isticmaalaan in kabadan 100 kun oo qof maalin walba, ayaa la nadiifiyaa kor iyo hoos. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun Madaxweynihii hore ee Xisbiga AK Party Samsun Xildhibaan Yuusuf Ziya Yılmaz, nidaamka tareenka magaalada loo keenay ayaa la bilaabay 2010-kii. Adeegga internetka ee bilaashka ah ee loogu talagalay muwaadiniinta nidaamka tareenka inta lagu gudajiray xilligii madaxweyne Yılmaz [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun ayaa saxeexday go’aan si gaar ah uga farxin doona ardayda. Dawlada hoose ee Magaala-weyn ayaa qiimo dhimis ku sameysay qiimaha tikidhada tareenka, basaska magaalada, basaska dadweynaha iyo shirkadaha gawaarida fiilada leh iyadoo la raacayo tilmaamaha Duqa magaalada Mustafa Demir. Ardayda [More ...]
Halkee ay joogi doontaa Xarunta Tareenka ee Xawaaraha Sare ee Samsun?
Xarunta tareenka xawaare sare ku taal ee Samsun, halkaas oo ay ku caddaatay. Maalun-xawaare xawaare sare leh oo ay maalgelineyso Samsun-Corum-Kirikkale oo ku baahsan xaddiga meeshii lagu dhawaaqay xarunta Zamun. Samsun waxay sugeysaa waqti dheer in laga sameeyo mashruuca tareenka xawaaraha-xawaaraha ku dheehan yahay ee la soo maray horumarro cusub. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Metrounis TCDD'ye waxay ka digtay: 'Wadooyinka Magaalada waa xiran yihiin' Degmooyinka Samsun Metropolitan, Samsun - Wadada Tareenka Sivas Tareenka Ilkadim Ataturk Boulevard Junction Isgoyska Kılıçdede Isgoyska Kala gooshka weyn ee taraafikada magaalada [More ...]
SAMULAŞ waxay ardayda u sharaxaysaa faa'idooyinka gaadiidka dadweynaha; SAMULAS waxay sii wadeysaa inay wargaliso. Agaasinka Guud ee Magaalada Samsun SAMULAŞ Agaasime guud, xeerarka ay tahay in la raaco marka la raaco gaadiidka dadweynaha ee ardayda dugsiga hoose iyo gaadiidka dadweynaha ee magaalada, deegaanka [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha ee Samsun
31 Ka dib Maarso, 25 illaa biyaha iyo 15 oo kordhay qiimaha aqrinta, Dawlada Hoose ee Magaalada Metroun ayaa go’aansatay inay sare u qaado khidmadaha gaadiidka waqtigan. Marka loo eego, dharka loo yaqaan '3 TL dolmus' [More ...]
Tartanka Kubbadda Cagta ee '' Firfircoonida Bulshada '' ee SAMULAŞ ee ay soo agaasimeen shaqaalaha inta ay le'eg tahay cayaaruhu, cayaaraha xiisaha leh ayaa la bilaabay bilowga qaybta u dhexeeya shaqaalaha SAMULAŞ ee kubbadda cagta, Atakum [More ...]
SAMULAŞ Shaqaale 'Badbaadinta Nolosha'
Degmada Samsun ee Magaalo Weyn SAMULAŞ, 'Gargaarka degdega ah wuxuu badbaadiyaa nolosha' mabda'a shaqaalaha ee 'Tababarka Gargaarka Degdegga ah' oo la Xaqiijiyay. Tallaabada koowaad ee shaqaalaha 40 waxay heleen tababbarka degdegga ah ee degdegga ah dhawaanahan Samsun [More ...]